ओली भन्नुहुन्छ : चन्दा नपाएर होला प्रचण्डले शेयर बजार ध्वस्त पारिदिन खाेजे ।
काठमाण्डाै : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शेयर बजार ध्वस्त बनाउने गरी अभिव्यक्ति दिँदा पनि कोही नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएकाे छ ।
ललितपुरको च्यासलमा रहेकाे तुलसीलाल अमात्य स्मृति भवनमा आज बुधवार आयोजित पार्टीका मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । शेयर काराेबारीले चन्दा नदिएपछि उनीहरूलाई ध्वस्त बनाउने गरी प्रचण्डले त्याे अभिव्यक्ति दिएको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ ।
शेयर लगानीकर्ता र सामान्य नागरिककाे लगानी जेसुकै होस् तर देशलाई बर्बाद पार्ने काममा प्रचण्डहरू लगातार लागिरहँदा पनि कसैले विरोधसमेत नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रचण्डले यो शेयर बजारको सन्दर्भमा बडा क्रान्तिकारी साम्राज्यवाद विकसित भयो भने शेयर बजार हुन्छ रे ।
साम्राज्यवादको विकसित रूप चाँहि लेलिनभन्दा पनि अलि बढी नै जान्ने भएछन्– दुई स्टेप । पुँजीवाद विकसित रूप भएर साम्राज्यवाद हुन्छ लेनिनले भनेका थिए । त्योभन्दा माथि गएर साम्राज्यवाद विकसित भयो भने शेयर बजार हुन्छ भनेर प्रचण्डले नयाँ थेसिस ठोक दिए ।
दुई दिनमा शेयर बजार धराशायी । त्यसले जनताको जीवनमा कति असर हुन्छ, शेयर लगानीकर्ताहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ ? तिनीहरूको आर्थिक स्थिति के हुन्छ ? केही पनि मतलब छैन । अर्थतन्त्रको केही पनि मतलब छैन । कुन शेयर काराेबारीले चन्दा दिएनन् होला, त्यही भएर उनले त्यसलाई ध्वस्त बनाउने गरी त्यसो भने ।
न रहे बास, न बजे बाँसुरी भनेर बजाए । यदि हामीले त्यस्तो गरेकाे भए सडक तात्थे, माइतीघरले पुग्दैन थियो । सञ्चार माध्यममा आगो बल्थ्यो । तर अहिले शान्त छ, चुपचाप, आराम, आनन्द छ सबलाई । कोही बोल्दैनन् । किनभने यहाँ अस्थिरता क्रियट गर्ने, अस्थिरता बनाउने देशमा ।
ध्व’स्त पारिरहने यता बिगार्ने, उता बिगार्ने, यता उठाएजस्तो गरिदिने, उता भत्का’इ दिने । यो खालको सिलसिला चलिराखेको हुनाले । यस्तो बोलि’रहनुपरेन ।’अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई सही विचार, व्यवहार र कार्यशैली अवलम्बन गर्दै देश र नागरिककाे सेवामा समर्पित भएर लाग्न सचेत गराउनुभयो ।
२०७८ मंसिर २९, बुधबार २०:५६ गते 1 Minute 216 Views
अध्यक्ष लिङ्देन भन्नुहुन्छ : राजालाई गा’ली गरेर राजनीति टिकाउने दिन गए ।
देउवालाई समर्थन गरे बापत सिंहले तत्काल उपप्रधानमन्त्री पाउने !
डराएका देउवालाई शेखरले देखाए झन् डर !